sports « Lokpath
विश्वकप छनोटमा नेपालको खराब सुरुवात:४ विकेटले पराजित
काठमाडौं । सिंगापुरमा जारी आईसीसी टी-ट्वान्टी विश्वकप छनोट अन्तर्गतको एसिया फाइनलमा नेपालले हार बेहोरेको छ । मंगलबार भएको पहिलो खेलमा कमजोर प्रतिद्वन्दी कतारसँग ४ विकेटले पराजित हुँदै नेपालले खराब सुरुवात
बलात्कार मुद्धामा रोनाल्डोले पाए यस्तो नतिजा, अब के हुन्छ ?
एजेन्सी । बलात्कारको आरोप रोमल्लि रहेका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई राहत मिलेको छ । अमेरिकी अभियोजनकर्ताले रोनाल्डोमाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको बिषयमा कुनै सजाय भोग्न नपर्ने बताएका छन् । सन् २००९
एसीसी कप क्रिकेट एक साता पछि सर्यो
काठमाडौं । श्रीलंकामा आयोजना हुन लागेको नेपालसहित एसियाका राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने एसीसी यू-१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता सरेको छ । एसीसी यू-१९ एसिया कप एक साता पछि सरेको हो ।
एजेन्सी । मैत्रीपूर्ण खेलमा स्पेनिस क्लब सेभिल्लासंग लिभरपुर पराजित भएको छ । प्रि–सिजन अन्तर्गत सोमबार बिहान सकिएको मैत्रीपूण खेलमा स्पेनिस क्लब सेभिल्लाले युरापियन च्याम्पियन लिभरपुललाई २-१ गेल अन्तरले हराएको हो
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथिको निलम्बन कायम राखेको छ । लण्डनमा बिहिबार बसेको आईसीसीको बोर्ड बैठकले क्यान निलम्बनबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।लण्डनको
एजेन्सी । इन्टरनेश्नल च्याम्पियन्स कपमा आर्सनलले वायर्न म्युनिखलाई पराजित गरेको छ । बिहिबार भएको खेलमा आर्सनलले जर्मन लिग च्याम्पियन बार्यनलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । ४९ औ मिनेटमा
विश्वकप छनोटको दोस्रो चरणमा नेपाल
काठमाडौं । कतारमा हुन लागेको सन् २०२२ को विश्वकपका लागि एसियाको दोस्रो चरणको छनोटमा नेपाल समूह ‘बी’ मा परेको छ । फिफाले बुधबार सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार नेपाल समूह ‘बी’
एजेन्सी । इन्ग्लिश क्लब आर्सनलले मैत्रीपूर्ण खेलमा अमेरिकी क्लब कोलोराडो रापिड्सलाई ३-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै सहज जित निकालेको छ । मंगलबार राति भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा आर्सनलले अमेरिकी क्लब कोलोराडो
एम्बाप्पेको दुई गोलमा पीएसजीको जित, डायनामो ड्रेसडेन स्तब्ध
एजेन्सी । प्रि-सिजनको पहिलो खेलमा पीएसजीले जर्मन क्लब डायनामो ड्रेसडेनलाई ६-१ को फराकिलो गोल अन्तरले हराएको हो । केलियन एम्बाप्पेको दुई गोलको सहयोगमा फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले फराकिलो
banner, राजनीति, लोकपथ हाइलाईट
स्वाथ्य जाँचका लागि प्रधानमन्त्री ओली फेरि सिंगापुर जाँदै, प्रचण्ड कार्यवाहक…
लायन्स क्लवकाे प्रथम क्याबिनेट मिटिङ भब्यताका साथ सम्पन्न, प्रथम महिला…
विप्लव समुहद्वारा मन्दिरको ६ रोपनी जग्गा कब्जा
रवी लामिछाने पक्राउबारे परराष्ट्रमन्त्रीले मुख खोले !
भाद्र ६ गतेसम्म यी राशि भएका व्यक्तिको भाग्य
रवीलाई भेट्न पुगे कांग्रेस नेता, भीड नियन्त्रणका लागि
रवी लामिछाने पक्राउपछि धुर्मुस सुन्तलीले यसो भने